“ဖခင်ဖြစ်သူဗိုလ်မှူးကြီးအားအာခံပြီး အာဏာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်တယ်လို့ဆိုလာတဲ့နေခြည်ဦး” – Moe Tauk Pan
သူမ.ဖေ့ဘွတ်အကေ.ာင့်ကိုလဲ ဖေ့ဘွ.တ်ကုမ္ပဏီကပိ.တ်ပေးရတဲ့အထိ .ပြည်သူတွေကရီပို့ထု.ဖျက်ခဲ့ကြတာ.ဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီလိုဖြ.စ်ပြီးနောက်ပို.င်းသူမကို.ဖေ့ဘွ.တ်မှာမတွေ့ရတော့ပါ.ဘူး။နေခြည်ဦး.ဟာ ပရိတ်သတ်.အချစ်တွေလျော့.နည်းခဲ့ရပြီးနောက် IG မှာ .တော်လှန်ရေးနဲ့.ပတ်သက်တဲ့ပုံအချို့ကိုအခုလို တင်လာတာဖြစ်ပါတယ
ဒါပေမယ့် ပရိတ်သ.တ်တွေရဲ့တော်.လှန်ရေးစိတ်ဓ.ာတ်ပြင်းပြမှုကြောင့် သူမအ.ကြောင်းတွေကို.ဖေ့ဘွတ်မှာ ဝေဝေ.ဆာဆာတင်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒိနောက်မှာတော့. သူမသူမရဲ့သတ.င်းတွေမှန်တာရော မမှန်တာရော .တင်နေတာတွေကို ထိန်းမနိုင်.ခဲ့တဲ့အတွက် …
သူမ.ဖဘှေ့တျအကေ.ာငျ့ကိုလဲ ဖဘှေ့.တျကုမ်ပဏီကပိ.တျပေးရတဲ့အထိ .ပွညျသူတှကေရီပို့ထု.ဖကျြခဲ့ကွတာ.ဖွဈပါတယျ အဲ့ဒီလိုဖွ.ဈပွီးနောကျပို.ငျးသူမကို.ဖဘှေ့.တျမှာမတှရေ့တော့ပါ.ဘူး။နခွေညျဦး.ဟာ ပရိတျသတျ.အခဈြတှလြေော့.နညျးခဲ့ရပွီးနောကျ IG မှာ .တျောလှနျရေးနဲ့.ပတျသကျတဲ့ပုံအခြို့ကိုအခုလို တငျလာတာဖွဈပါတယ
ဒါပမေယျ့ ပရိတျသ.တျတှရေဲ့တျော.လှနျရေးစိတျဓ.ာတျပွငျးပွမှုကွောငျ့ သူမအ.ကွောငျးတှကေို.ဖဘှေ့တျမှာ ဝဝေေ.ဆာဆာတငျခဲ့ကွပါတယျအဲ့ဒိနောကျမှာတော့. သူမသူမရဲ့သတ.ငျးတှမှေနျတာရော မမှနျတာရော .တငျနတောတှကေို ထိနျးမနိုငျ.ခဲ့တဲ့အတှကျ …
ဘဝတပါးပြောင်းသွားတာ (၂)နှစ်ပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ခင်ပွန်းကို တရက်မှ မမေ့ပါဘူးလို့ ဆိုလာတဲ့ အကယ်ဒမီ ဝါဝါဝင်းရွှေ
စကစမှ အသဲအသန်လိုက်ဖမ်းတာခံနေရပေမယ့် လွတ်မြောက်နယ်မြေကဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ သရုပ်ဆောင်အကယ်ဒမီမျိုးသန္တာထွန်း